Planet Mercury: astaamaha, cabirka, heerkulka iyo xiisaha | Saadaasha Shabakadda
Ku noqoshada kuweenna Nidaamka qoraxda, waxaan la kulannaa siddeed meere oo leh satelite-yadooda iyo xiddigeena Sun. Maanta waxaan u nimid inaan ka hadalno meeraha ugu yar ee ku wareega qoraxda. Meeraha Mercury. Intaa waxaa dheer, waa tan ugu dhow dhammaan. Magaceedu wuxuu ka yimid rasuul ka mid ah ilaahyada lamana oga goorta la ogaaday. Waa mid ka mid ah shanta meere ee si fiican looga arki karo Dhulka. Liddi ku ah meeraha Jupiter waa kan ugu yar dhammaan.
Haddii aad rabto inaad si qoto dheer u ogaato meerahan xiisaha leh, qoraalkan waxaan kuu sheegi doonaa wax walba oo walwal ah
1 Meeraha Mercury
5 Xiisaha dunida meerkuriga
Waqtiyadii ugu qadiimiga badnaa waxaa loo qaatay in meeraha meerkurigu uu had iyo jeer u jeedo qorraxda. Si la mid ah Dayaxa oo leh Dhulka, waqtigiisa wareega wuxuu la mid yahay waqtiga tarjumaadda. Kaliya waxay qaadataa 88 maalmood inaad ku wareegto qorraxda. Sikastaba, sanadkii 1965 waxaa loo diray raadaar taas oo ay macquul aheyd in lagu ogaado in waqtigeeda wareega ay tahay 58 maalmood. Tani waxay ka dhigeysaa saddex-meelood laba meel waqtigiisa tarjumaad. Xaaladdan waxaa loo yaqaan 'resonance resonance'.
Maaddaama ay tahay meeraha leh meere aad u yar oo ka yar kan dhulka, waxay ka dhigeysaa mid aad ugu dhow Qorraxda. Waxay heshay qaybta meeraha ugu yar sideedda nidaamka qorraxda. Markii hore, Pluto wuxuu ahaa kan ugu yar, laakiin ka dib markii loo tixgeliyo inuu yahay qorshe-dejin, Mercury ayaa ah bedelka.
In kasta oo ay yartahay, Waa la arki karaa iyada oo aan Telescope laga helin Dunida mahadnaqdeeda ay ugu dhowdahay Qorraxda. Way adag tahay in la garto iftiinkiisa dartiis, laakiin si fiican ayaa loo arki karaa gabbaldhaca iyadoo qorraxdu u dhacdo galbeedka oo si dhib yar looga arki karo cirifka.
Waxay ka tirsan tahay kooxda meerayaasha gudaha. Waxay ka kooban tahay maaddooyin hufan iyo dhagaxyo leh, oo isku dhafan oo kala duwan oo gudaha ah. Tirada xeryahooda dhammaantood waa isku mid. Waxay leedahay astaamo ku habboon sida meeraha Venus. Waana meeraha aan lahayn dayax gacmeed dabiici ah oo meertadiisa ku wareegaya.
Dusha sare oo dhan wuxuu ka samaysan yahay dhagax adag. Sidaas darteed, wuxuu ka kooban yahay qayb ka mid ah dhulka afarta meere ee ugu dhagax weyn nidaamka qorraxda. Sida laga soo xigtay saynisyahannada, meerahan ayaa malaayiin sano aan wax dhaqdhaqaaq ah lahayn. Dushiisa waxay la mid tahay tan Dayaxa. Waxay leedahay godad badan oo laga sameeyay shilalka meteorites iyo comets.
Dhinaca kale, waxay leedahay dusha sare oo siman oo xariiq leh qaab-dhismeed la mid ah kan buuraha. Waxay awood u leeyihiin inay fidiyaan boqollaal iyo boqollaal kiilomitir oo ay gaaraan dherer mayl ah. Ubucda meerahan Waa macdan waxayna leedahay gacan ku dhow qiyaastii 2.000 kiilomitir. Daraasadaha qaarkood waxay xaqiijinayaan in xarunteedu sidoo kale ka samaysan tahay bir bir ah sida tan dhulkeenna.
Marka loo eego cabirka meerkuriga, waxyar ayuu ka weyn yahay Dayaxa. Tarjumaaddiisu waa tan ugu dhaqsaha badan dhammaan qoraxda sababta oo ah waxay ugu dhowdahay Qorraxda.
Dushiisa waxaa ku yaal qaabab qaarkood oo geesaha leh oo ka muuqda xaalado kala duwan oo badbaado ah. Meelaha qaar ayaa ka yar, geesaha jajabanna waxaa aad ugu muuqda saameynta meteorites. Waxay leedahay berkedo waawayn oo dhowr siddo leh iyo tiro badan oo wabiyaal ah.
Dhammaan godadka oo dhan waxaa ku jira mid u gaar ah cabir loo yaqaan Carlori Basins. Dhexroorkeedu waa 1.300 kiiloomitir. Godka baaxaddiisu le'eg tahay wuxuu sababay inay soo baxaan masaafo dhan 100 kiilomitir. Saamaynta xoogan ee isdaba jooga ah ee meteorites iyo majaajilladaha, ayaa siddooyinkii buuraha oo dhererkoodu gaadhayaa saddex kiiloomitir ayaa la sameeyay. Ahaanshaha meerahan yar, isku dhaca meteorites wuxuu sababay mowjado dhul gariir ah oo u safray dhamaadka kale ee meeraha, isagoo abuuray dhul gabi ahaanba jahwareersan. Markii tani dhacday, saameynta waxay abuurtay wabiyada lava.
Waxay leedahay buuro waaweyn oo lagu soo saaray qaboojinta iyo hoos u dhac ku yimaada cabirkeeda kiiloomitir badan. Sababtaas awgeed, qolof duudduuban ayaa la sameeyay oo ka kooban buuro dhaadheer dhowr kiiloomitir oo dheer iyo dheer. Qeyb wanaagsan oo ka mid ah dusha meerahan waxaa daboolay bannaanka. Tan waxaa ugu yeera saynisyahano aagga iskuxirka. Waa inay samaysmeen markii meelihii qadiimiga ahaa lagu aasay wabiyada dhagaxa.
Xaga heer kulka, waxaa loo maleynayaa ku dhowaanshaha Qorraxda inay ugu kulushahay dhamaan. Si kastaba ha noqotee, tani maahan sidaas. Heerkulkeedu wuxuu gaari karaa 400 darajo meelaha ugu kulul. Adoo yeelanaya meeris aad u gaabis ah, waxay keentaa in gobollo badan oo meeraha ah ay hadh ka baxaan falaadhaha qorraxda Meelahan qabow, heer kulka ayaa ka hooseeya -100 digrii.
Heer-kulkoodu aad buu u kala duwan yahay, way tagi karaan inta udhaxeysa -183 digrii Celsius habeenkii iyo 467 Celsius maalintii, tani waxay ka dhigaysaa meerkurida mid ka mid ah meerayaasha ugu shidan Nidaamka Cadceedda.
Xiisaha dunida meerkuriga
Mercury waxaa loo tixgeliyaa meeraha leh godadka ugu badan Nidaamka Qorraxda. Tan waxaa ugu wacnaa la soo noqnoqoshada iyo la kulanka majaajiladaha aan la koobi karayn iyo astaamo-yaqaanno taasina waxay saameyn ku yeelatay dusheeda. Inta badan dhacdooyinkaas cilmiga dhulka ah waxaa loogu magac daray fannaaniin caan ah iyo qorayaal caan ah.
Godka ugu weyn ee ay leedahay Mercury, waxaa loo yaqaan Caloris Planitia, godkan wuxuu cabiri karaa qiyaastii 1.400 oo kiilomitir oo ballaciisu yahay.
Meelaha qaarkood dusha sare ee Meerkuriga waxaa lagu arki karaa muuqaal duuduuban, tan waxaa u sabab ah yaraanshaha meeraha uu sameeyay markii xudunta ay qaboojisay. Natiijada foosha meeraha markuu xudduntiisu qabowdo.
Si aad u daawato meerkurida ka socota dhulka, waa inay ahaataa fiidkii, taas oo ah, ka hor qorrax soo baxa ama isla marka qorraxdu dhacdo.
Gudaha Mercury waxaad ku arki kartaa laba qorrax ka soo bax: Kormeeraha ku sugan meelaha qaarkood ayaa u kuur geli kara dhacdadan cajiibka ah ee ay Qorraxdu ka soo muuqaneyso jihada, ay istaagayso, oo ay mar kale ka soo noqoneyso meeshii ay ka tagtay, mar kalena ay cirka u soo baxday si ay safkeeda u sii wado
Macluumaadkan waxaad ku baran kartaa wax badan oo ku saabsan meerahan cajiibka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Meeraha Mercury